Shuruuddii 2-aad, oo lagu khasbay Farmaajo in uu fuliyo . - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Shuruuddii 2-aad, oo lagu khasbay Farmaajo in uu fuliyo .
Shuruuddii 2-aad, oo lagu khasbay Farmaajo in uu fuliyo .
Wararka kasoo baxaya Villa Soomaaliya, ayaa tibaaxaya in madaxweyne Farmaajo ay qasab ku noqotay in uu aqbalo sharuudda kale oo kamida kuwa ay furitaanka shirka ku xireen Dene iyo Axmad madoobe.
Farmaajoy, ayaa aqbalay in in sharka ay ka qayb galaan, madaxda maamullada maqan. Madasha Xisbiyada Mucaraadka ah, ururada bulshada rayidka ah iyo inta badan saamilayda siyaasadda Soomaaliya.
Waa shuruuddi labaad ee lagu soo warramayo in lagu khasbay in uu fuliyo farmaajo si uu shirka arrimaha doorashooyinku u furmo.
Qodobka kale ee lasheegay in uu farmaajo aqbalay, ayaa ah in Dawladda Federaal-ka ahi ay gobolka Gedo kasaar gabi ahaanba ciidamada ay geysay, isla markaana ay maamulka gobol kaasi gacanta u geliso dawlad goboleedka Jubbaland.
Siciid Cabdillaahi Deni iyo Axmad Madoobe, ayaa u muuqda laba nin oo raba in Farmaajo ay sarajoogga kaga dhammaystaan dhammaan danaha siyaadeed iyo kuwa dhaqaale ee ay leeyihiin inta uusan furmin shirku.
Mawqifkan adag ee ay istaageen Deni iyo Madoobe, ayaa waxaa sabab u ah, baahida uu maanta qabo madaxweyne Farmaajo, oo muddadii uu xilka hayay dagaal , cunaqabayn maamul iyo mid dhaqaaleba ku waday labadan hoggaamiye iyo maamulladooda.
Nin Muruq-maal ah oo Garoowe lagu dilay maanta
10-qodob ka ogow, isbeddelkii Xasan Cali Khayre kusameeyay ciidamada dalka.